Wararka - Kooxda Zishan: Xakamaynta tayada heer kasta si loo abuuro biyo la cabo oo caafimaad qaba
Wu Xiuli, Xarunta TV-ga Zhangzhou: Waxaan aaminsanahay inaadan aqoon u yeelan doonin warshada aan maanta galayno. Laga soo bilaabo pickles-ka miiska ilaa miraha iyo khudradda cabitaannada ah ee aan inta badan cabno, iyo xitaa biyaha la cabbo ee ay tahay inaan maalin walba cabno, gadaashayda waa wax soo saar aad u weyn Waxaa laga heli karaa warshadda. Haa, waa shirkadda hormoodka ka ah warshadaha cuntada ee Zhangzhou, Zishan Group, marka maanta waxaan raaci doonaa raadka weriyaha si aan u arko sida cuntooyinkan loo sameeyo.
Fujian Zishan Group waa shirkad fure qaran oo horseed u ah. Waxaa la aasaasay bishii Maarso 1984. Ka dib 30 sano oo horumar isdaba-joog ah iyo hal-abuur ah, waxay hadda leedahay 10 hoosaadyo iyo shirkado haysta hanti guud oo ku dhow 1 bilyan yuan. Waxaa qiimeeyay Dowlada Hoose ee Zhangzhou sanado badan. Sida "cashuur bixiye weyn". Wax soo saarka waxaa ka mid ah cuntada qasacadaysan, pickles, biyaha macdanta ah, cabitaanka miraha iyo khudradda iwm. Marka loo eego heerarka qaranka, biyaha macdanta ah waxay u baahan yihiin in si fiican loo sifeeyo oo jeermiska loo diro.
Yang Jubin, oo ah maamulaha shirkadda Zhangzhou Zishan Mineral Water Co., Ltd.: Miiraha dhuxusha waxaa loogu talagalay in lagu xayeysiiyo wasakhda qaar ka mid ah biyaha guga buuraha. Shaandhada shan-mayr, miiraha hal-mayr iyo filter-ka yar ee 0,22. Miirayaashaani waxay xaqiijin karaan in wasakhda biyaha ku jirta la sifeeyo si loo buuxiyo shuruudaha ma-dhalaysnimada, ugu dambayntiina loo maro munaaraddan isku-dhafka ah ee ozone-ka loogu talagalay Sterilize-ka saxda ah, ka dibna loo sii gudbo buuxinta.
Sida wasakhda wasakhda ee biyaha ceeriin, shey kasta oo ka mid ah Zishan waxay u baahan tahay in lakabka lagu baaro lakab.
Yang Jubin, Maamulaha Zhangzhou Zishan Mineral Water Co., Ltd.: Waxay ka bilaabataa afuufida, dhalo walbana si adag ayaa loo kormeeraa, loola socdaa loona buuxiyaa. Nidaamka buuxinta waxaa lagu fuliyaa xaalad nadiif ah. Waxaan hubineynaa in dhalo kasta la baaro. Kahor intaan alaabta la rarin, waxaan sidoo kale leenahay xakameyn tayo leh oo aan ku kormeerno dhammaan alaabada.
Iyada oo horumarka joogtada ah ee qaab nololeedka dadka, waxaa sidoo kale jira shuruudo sare oo looga baahan yahay biyaha la cabbo. Iyada oo laga jawaabayo isbeddelka suuqan, astaanta-dhamaadka sare ee Zishanshui Zhuleshanquan ayaa dhalatay. Ka fog buuqa iyo buuqa magaalada, warshadda Chengxi ee ku taal Zishan waxay leedahay keymo bambooyin cufan. Isha biyaha ee Guga Bu'da Zhule waxay ka timaadaa ilaalinta keymahaas bamboo.
Yang Jubin, oo ah maamulaha shirkadda 'Zhangzhou Zishan Mineral Water Co., Ltd.: Heerka caymiska bamboo ee buurta oo dhan halkan ayaa ka badan 90%. Waxaa jira odhaah dhinaceena ah oo leh biyaha bambooyinku candhuufta u tufay waxaa loo yaqaan "bamboo candhuuf biyo." Biyaha baasaboorka ayaa si gaar ah u qabow, uguna alkalisan waxay dhexdhexaad ka dhigi karaan aashitada daciifka ah ee jirkeenna. Ka dib cabitaanka biyaheena, pH-da waa la hagaajin karaa si loo gaaro saameyn caafimaad leh.
Suuqa adag ee suuqa iyo cabitaanka, Zishan waxay had iyo jeer awood u leedahay inay si adag u qabsato meel, taas oo inta badan ay ugu wacan tahay aragtida suuqa ee saxda ah. Qofka mas'uulka ka ah shirkadu wuxuu aaminsan yahay in mustaqbalka biyaha biyaha macdanta, cabitaanka biyaha caafimaadka qaba ay noqon doonaan kuwo tartan badan. Sababtoo ah macaamiishu uma baahna oo keliya dhalo biyo ah, laakiin sidoo kale waxay u baahan yihiin nolol caafimaad leh.
Wariyuhu wuxuu yidhi: biyuhu waa wax soo saar macaamil caadi ah. Isbeddelada isdaba jooga ah ee hab nololeedka dadka, warshadaha cabitaanka waxay la kulmeen horumar aan horay loo arag. Macaamiisha ayaa si tartiib tartiib ah u aqoonsanaya oo u dooranaya cabitaanno caafimaad leh oo ka mid ah noocyada soo ifbaxaya ee alaabada. Tani waxay sidoo kale ka dhigan tahay in markay macaamiisha iibsadaan biyaha macdanta maalmahan, waxa ay iibsadaan aysan ahayn nooc ka mid ah raaxeysiga, laakiin sidoo kale fikrad nolol caafimaad leh. . Waxaan u maleynayaa inay tani sidoo kale tahay sabab muhiim ah oo ah in biyaha macdanta Zishan ay dayactireen iibka xasiloon ee suuqa biyaha la cabbo sannado badan oo ay noqdeen wax soo saar loo qoondeeyey oo ay leedahay shirkadda Xiamen Airlines